भारतमा एकैदिनमा अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै एक लाख २७ हजार सङ्क्रमित : RajdhaniDaily.com -
एजेन्सी - April 10, 2021 0
Home Editor-Picks भारतमा एकैदिनमा अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै एक लाख २७ हजार सङ्क्रमित
नयाँदिल्ली । भारतमा एकैदिनमा अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुले बिहीबार दिएको जानकारीअनुसार भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा एकैदिन झण्डै एक लाख २७ हजार जना सङ्क्रमित भएका हुन् ।
केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले भारतमा अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै एकैदिन एक लाख २६ हजार ७८९ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको जनाएको छ । पछिल्लो विवरणसँगै भारतमा अहिलेसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड २९ लाख २८ हजार ५७४ पुगेको छ ।
पछिल्लो एक दिनमा भारतमा ६८५ जनाको कारोनभाइरसका कारण मृत्यु भएको पनि अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । योसँगै भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरुको कुल सङ्ख्या एक लाख ६६ हजार ८६२ पुगेको छ ।
भारतमा अहिलेपनि सङ्क्रमित अवस्थामै रहेकाहरुको सङ्ख्या नौ लाख १० हजार ३१९ रहेको छ । यसअघि एकैदिनमा सवैभन्दा धेरै बुधबार एक लाख १५ हजार ७३६ जना सङ्क्रमित भएका थिए ।
पछिल्लो केहीदिनदेखि भारतमा दैनिक एक लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् । यो तथ्याङ्कले भारतमा नयाँ सङ्क्रमितहरुको सख्या दैनिक रुपमा बढ्दै गएको देखाएको छ ।
बाजुरामा बाढीपहिरोले साउन यता ४५४ जना बिस्थापित, अझै पुगेन सरकारी राहत
बाजुरा । बाजुरा जिल्लामा साउन एक गतेबाट आजसम्म जिल्ला भरीका बर्षादसंगै गएको बाढी पहिरोले चार सय ५४ जना बिस्थापित भएका छन् । एक जनाको...
खेल एजेन्सी - May 12, 2020 0
होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितको मृत्यु
प्रदेश ३ एजेन्सी - October 10, 2020 0
चितवन । कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भई होम आइसोलेसनमा रहेका एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका–२० माइली चोकका ६७ वर्षीय पुरुष...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - April 3, 2021 0
सेना दिवसमा पत्रकार विभूषित
प्रदेश एजेन्सी - February 21, 2020 0
काठमाडाैं । महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाले आठ पत्रकारलाई ‘प्रधानसेनापति प्रशंसा पदक’ प्रदान गरेको छ । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित...
अध्यादेश तरंग र सहयोगीको भूमिका
बिचार एजेन्सी - April 27, 2020 0
गत साता नेपाली राजनीतिका हिसाबले निकै उत्कर्षमय बन्यो । ऐतिहासिक हिसाबले पनि उक्त साता महत्वपूर्ण थियो नै । पाँच वर्षअघि आएको प्रलयकारी महाभूूकम्प र...
अन्तराष्ट्रिय एजेन्सी - January 26, 2021 0
Breaking News एजेन्सी - February 1, 2021 0
काठमाडौं । चीनले नेपाललाई कोरोना भाइरसविरुद्धको ३ लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका अनुसार नेपालाई छिटै अनुदानमा खोप दिन...
Exclusive एजेन्सी - March 10, 2020 0
बैतडीमा बलात्कारका आरोपित पक्राउ, किशोरीको उद्धार
Breaking News एजेन्सी - September 9, 2020 0
जिल्लाको सिगास गाउँपालिकाकी १७ वर्षीया किशोरी बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले तीनजनालाई मङ्गलबार अपराह्न नियन्त्रणमा लिएको छ । किशोरीमाथि शिक्षक खडकबहादुर बोहरा, गाउँपालिकामा कार्यरत केशव बोहरा...
मधुजंग पाण्डे - April 15, 2021
एजेन्सी - September 10, 2020